လက်သည်း၊ခြေသည်း သွေးခြည်ဥခြင်း ဖြစ်စေသော အကြောင်း နှင့် ကုသနည်းများ - Page 39 of 45 - Hello Sayarwon
Dr.Aye Myat Myat Noe မှ ရေးသားသည်။ တစ်ပတ် အကြာက တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
လက်သည်းခွံ၊ ခြေသည်းခွံတွေအောက်မှာ အနီရောင်၊ အညိုရောင်တွေ ပြောင်းပြီး သွေးယိုနေတာမျိုး သတိထားမိဖူးပါသလား။ ‘ဒုက္ခပဲ၊’ ‘ဘာလို့သွေးတွေယိုနေပါလိမ့်၊’ ‘သွေးယိုနေတယ်၊ ရောဂါကြီးတစ်ခုခုတော့ဖြစ်ပြီထင်တယ်’ စသည်ဖြင့်ကော တွေးခဲ့ဖူးပါသလား ။ စိတ်မပူပါနဲ့။ ထို လက်သည်းခွံအောက် သွေးယိုခြင်း၊ သွေးခြည်ဥခြင်းဟာ ထိုလက်သည်း၊ အရိုး နဲ့ အခြားတစ်ရှူးတွေမှာ ထိခိုက်မှုတွေရှိတာမဟုတ်ရင် စိတ်ပူစရာအရာတစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။
လက်သည်းအောက်မှာ သွေးခြည်ဥခြင်းဟာ များသောအားဖြင့်တော့ လက်သည်း ထိခိုက်မှုကြောင့် ရလာတာပါ။ ဥပမာ-
• လက်ချောင်းတွေကို ထုမိခြင်း
• အလေးတုံး ခြေချောင်းတွေပေါ် ပြုတ်ကျခြင်း
• ကားတံခါးကြား လက်ချောင်းညပ်ခြင်း၊ အိမ်တံခါးကြား ခြေချောင်းညပ်ခြင်း
• ကြမ်းပြင်၊ လမ်းပေါ်မှာ ခြေမဖြင့်ဆောင့်ပြီး နင်းမိခြင်း စတဲ့ အချက်တွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အကျိတ်များပေါ်ခြင်းကဲ့သို့ အခြားအချက်တွေကြောင့်လည်း လက်သည်းအောက် သွေးခြည်ဥနိုင်ပါတယ်။ လက်သည်း၊ ခြေသည်းအောက်မှာ အကျိတ်ပေါ်တဲ့အခါ လက်သည်း၊ ခြေသည်းအောက်က အရေပြား ညိုမည်းလာပါတယ်။ ထိုအကျိတ်ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းကို သိရအောင်တော့ ဆေးခန်းသွားဖို့အကြံပေးပါရစေ။
နာကျင်မှုလည်း မရှိ၊ သွေးယိုစိမ့်သော ပမာဏလည်းနည်းတယ်ဆိုရင် ကုသဖို့မလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နာကျင်နေမယ်၊ သွေးယိုခြင်းကလည်း မရပ်သွားဘူး လက်သည်းမှာ ထိခိုက်နေတာလည်း များတယ် ဆိုရင်တော့ အကူအညီလိုပါပြီ။
လက်သည်း၊ ခြေသည်းအောက်မှာ သွေးတွေအိုင်နေခြင်းကြောင့် နာနေမယ်ဆိုရင်တော့ ထိုသွေးတွေကို ဖယ်ရှားဖို့လိုပါလိမ်မယ်။ ဆရာဝန်က ထိခိုက်တဲ့နေရာက သွေးဖိအားကို လျော့အောင် ကုသမှုပေးပါလိမ့်မယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ထုံဆေးပေးပါမယ်။ သွေးတွေ ထုတ်ပစ်ဖို့ နည်းအချို့ရှိပါတယ်။ ၎င်းတို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
• ပထမနည်းက အပူပေးထားသော ဝါယာ (သို့) ကာဗွန်လေဆာဖြင့် လက်သည်းခွံ၊ ခြေသည်းခွံတွင် အပေါက်ဖောက်ခြင်း ဖြစ်တယ်။ အပူချောင်းက သွေးခဲကို ထိမိချိန်တွင် အေးသွားသောကြောင့် လက်သည်း၊ ခြေသည်း အောက်ခြေအသားကို အပူလောင်မှာ မစိုးရိမ်ရသလို နာကျင်မှုမရှိဘဲ အလျင်အမြန် ပြီးသောနည်းဖြစ်တယ်။
• အပ်သုံးခြင်း။ လက်သည်းခွံကိုဖောက်ရန် အပ်ကိုသုံးမှာ ဖြစ်ပြီး ထိုအပေါက်ငယ်မှ တစ်ဆင့် သွေးများ အပြင်ကို စိမ့်ထွက်သွားမှာဖြစ်တယ်။
သွေး ဖောက်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါ ထိုနေရာကို ပတ်တီးစည်းပေးပါလိမ့်မယ်။ ထိုပတ်တီးကို ၁၂ နာရီလောက် ထားရမှာဖြစ်ပြီး ရောင်ရမ်းခြင်း၊ နာကျင်ခြင်းရှိပါက ရေခဲ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေခဲကို ထိခိုက်ထားတဲ့ လက်သည်းပေါ် တိုက်ရိုက်မတင်ရပါ၊ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံ လက်သည်းခွာပစ်ရတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်သည်း အသစ်က နောက်ထပ် ၆လ မှ ၉လလောက်မှာ အပြည့်ပြန်ထွက်လာပါတယ်။
လက်သည်း၊ ခြေသည်းခွံအောက် သွေးခြည်ဥခြင်းဟာ လက်သည်းခွံ၊ ခြေသည်းခွံတွေအောက်မှာ သွေးယိုနေတဲ့ ပုံစံနဲ့ လာတတ်ပါတယ်။ လက်ချောင်းတွေကို တူနဲ့ထုမိတဲ့အခါ၊ ခြေချောင်းတွေ တံခါးညပ်တဲ့အခါတွေမှာ ဖြစ်တတ်ပြီး နာကျင်မှုသက်သာဖို့အတွက် ကုသရန် သင့်ပါတယ်။ ထို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ ပြသသင့်ပါတယ်။
1. Subungual Hematoma. http://www.aocd.org/?page=SubungualHematoma. Accessed March 11, 2017.
2. Subungual Hematoma (Bleeding Under the Nail). http://www.webmd.com/skin-problems- and-treatments/bleeding-under- nail#1. Accessed March 11, 2017.
3. Stossel CA. Treatment of Subungual Haematoma. British Medical Journal. 1964;1(5387):909.